I-WP15 yi-Oukitel's smartphone entsha ene-15.600 mAh ibhetri | I-Androidsis
Ibhetri yenye yezona ziphambili iintloko kubavelisi abaninzi kunye nabasebenzisi. Ukuba nebhetri esivumela ukuba sonwabe kwi-smartphone yethu yonke imini ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuqwalaselwa kubalulekile xa uthenga i-smartphone entsha.
Ngale ndlela, abafana abavela e-Oukitel basebenze kwisisombululo kumthamo ophantsi webhetri yee-smartphones ezininzi, amandla athe ngokufika kwetekhnoloji ye-5G iye yambi, kunye I-Oukitel WP15, i-smartphone enonxibelelwano lwe5G kunye nokudibanisa ibhetri eyi-15.600 mAh.
1 Qalisa ukwazisa
2 Ibhetri yeentsuku ezi-4 zokuzimela
4 Ukumelana nokuwa
6 Icandelo lezithombe
7 6,52 intshi HD + isikrini
8 I-Android 11 ngaphakathi
9 Umphindi weWIFI
11 Ukucaciswa kweOukitel WP15
I-Oukitel WP15 iya kufika kwintengiso ye $ 299,99. Ukubhiyozela ukumiliselwa, abafana base-Oukitel iya kunika abathengi bokuqala abayi-100 i-smartwach exabisa i $ 50.
Kwaba bathengi balandelayo, ukuya kuthi ga kwinani lama-600, ezi izakufumana iseti yentloko engenazingcingo. Ukuthatha ithuba lokubonelela kuya kufuneka uyenze ngokusebenzisa le khonkco.
Ibhetri yeentsuku ezi-4 zokuzimela
I-smartphone entsha ye-Oukitel, i-WP15 isinika umthamo webhetri olingana nawo Iintsuku ezi-4 zokusetyenziswa kwesiqhelo okanye iiyure ezili-1.300 zokulinda, konke ngaphakathi komzimba okumelana nokuwa kunye nokothuka. Ngalo mthamo webhetri, i-WP15 iba yifowuni ye-5G enesikhundla esiphezulu sebhetri kwintengiso.
Ukuze abasebenzisi basebenzise obu bukhulu bukhulu, i I-WP15 ixhasa ukutshaja okuphindayo, ekuvumela ukuba ubize ezinye izixhobo ezihambelana ne-Qi ngaphandle kwefowuni, uzibeke ngasemva kwesixhobo.
Ngomthamo omkhulu webhetri, i-WP15 yiyo ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-18W, esivumela ukuba sihlawulise ngokupheleleyo esi sixhobo malunga neeyure ezi-5. Ukuba uthanda ukuya kwi-adventure kwaye uphathe izixhobo ezimbalwa ngangokunokwenzeka, i-Oukitel WP15 ilungile.
Ngokungafaniyo nabanye abavelisi abagxile kwinto ethile, abafana baseOukitel bazikhathalele zonke iinkcukacha. Ngaphakathi kwe-Oukitel WP15 sifumana Ubungakanani beMediatek Ubungakanani be-500 5G iprosesa eyintloko ye-8, iprosesa esivumela ukuba sonwabe ngokupheleleyo kwimidlalo esiyithandayo.
Le prosesa ibandakanya ukudityaniswa kwe5G, okungamaxesha angama-10 ngokukhawuleza kunenethiwekhi yangoku ye-4G. I-chip ye-Mediatek inikezela Isantya esiphezulu sokukhuphela i-2,3 Gbps kunye ne-1,2 Gbps yokulayisha esivumela ukuba sithi ndlela-ntle xa kuthiwe sidlala iividiyo kumgangatho we-4k kwaye silale kwimidlalo.
Kunye neprosesa ye-Mediatek Dimension 500 5G, sifumana Imemori ye-8 GB ye-RAM, esivumela ukuba sigcine ukuvula inani elikhulu lezicelo ngasemva kwaye imidlalo iqhuba ulwelo ngakumbi. Ngokumalunga nokugcinwa, i-Oukitel WP15 isinika Indawo yokugcina yangaphakathi ye128 GB, indawo esinokwandisa ukuya kuthi ga kwi-256GB kunye nekhadi le-TF.
I-Oukitel WP15 ayisiyonto ilungele ukubaleka ngaphandle kuphela ngenxa yomthamo omkhulu webhetri, kodwa nangenxa yokuxhathisa kwayo kothuko kunye namaconsi. Ngale ndlela, iWP15 isinika Isiqinisekiso se-IP68 kunye ne-IP69K, izitifiketi ezikhusela isixhobo emanzini naseluthulini.
Ukongeza, ikwanayo ne Isatifikethi se-MIL-STD-810G, Isiqinisekiso semikhosi esemgangathweni esiqinisekisa ukugcina ukuthembeka kwesixhobo kuyo nayiphi na imeko.
IPodemos yibhaptize ukuya kuthi ga kwi-1,5 yeemitha ubunzulu ngaphezulu kwemizuzu engama-30, Yenza ukuba ilungele ukusetyenziswa phantsi kwamanzi kokubini echibini naselunxwemeni. Iyaxhathisa nokuwa ukusuka kwi-1,5 yeemitha ukuphakama.
I-Oukitel WP15 isinika a uyilo lwekhabhoni yefibre yoyilo yongeza ukhuseleko olongezelelweyo kwisiphelo sendlela. Ifleshi yesixhobo yenzelwe ukubonelela ngokukhanya okukhulu xa usenza imisebenzi yangaphandle ebusuku, enkosi kuyilo olumilise i-V, iyenye indlela ebalaseleyo yokukhanya kwethotshi esetyenziswa ngokuqhelekilyo ngaphandle.
Ukongeza kwibhetri, Icandelo lokufota lelinye lezona zinto zibalulekileyo kubasebenzisiKuba ii-smartphones zihlala zikunye nathi kwaye zisivumela ukuba sigcine awona maxesha abaluleke naphi na apho sikhona.
I-Oukitel WP15 ibandakanya Ikhamera ye-selfie eyi-8 MP enobukrelekrele bokwenza izinto Isusa ukungafezeki kolusu olukhanyayo. Ngasemva, sifumana Imodyuli ye-MP eyi-48 yenziwe nguSony (inkokheli yentengiso kwimizwa yeefoto), kunye ne-2 MP macro sensor kunye nekhamera eyi-0,3 MP ejolise ekuthatheni imifanekiso kunye nemvelaphi ngaphandle kokugxila.
6,52 intshi HD + isikrini
I-Oukitel WP15 idibanisa isikrini 6,52 intshi nge-HD + isisombululo esivumela ukuba sonwabele iividiyo zethu kunye neefoto ezikumgangatho olungileyo. Isikrini sine-18: 9 factor ratio eyenza ukuba ilungele ukujonga iividiyo ezibanzi ngaphandle kwemida emnyama echaphazela amava omsebenzisi.
Isikrini sibandakanya ifayile ye- Uluhlu lokhuselo lweCorilla enikezela ukumelana nokukrwela kwesiqhelo okwenzeka xa sigcina iselfowuni engxoweni yethu, ipokotho, ubhaka ...
I-Android 11 ngaphakathi
Zonke iindaba ezaziswa nguGoogle ngokusungulwa kwe Android 11, ezinje ngemowudi yomdlalo, ibhloko yeefowuni ezingaziwayo, izaziso ngaphakathi kwezicelo ... WhatsApp…
I-Oukitel WP15 ibandakanya umsebenzi ongafumanekiyo kwii-smartphones ezininzi kwintengiso, umsebenzi osivumela ukuba Sebenzisa i-smartphone yakho njengesiphindi seWi-Fi, esivumela ukuba sandise isiginali yeWi-Fi kwezinye iindawo ngaphandle kokusebenzisa ezinye izixhobo.
Njengoko benditshilo ngasentla, i-Oukitel WP15 iyahambelana neenethiwekhi ze5G, kodwa nayo, le modeli iyasivumela ukuba siyisebenzise Iifowuni ezimbini ze-5G kunye, okoko nje ukuba unxibelelwano lukhona kwi-opharetha yethu. Ngale ndlela, sinokusebenzisa ifowuni enye imihla ngemihla, kunye nomgca omnye wokusebenza kunye nomnye ixesha lokuzonwabisa.
Nalu ushwankathelo lwentloko Iimpawu ezibonelelwa yi-Oukitel WP15.
CPU: 700-core MediaTek Ubukhulu 8
I-GPU: I-ARM G57
I-ROM: 128GB iyandiswa iye kwi-256GB nekhadi le-TF
Iikhamera ezingasemva: 48MP + 2MP + 0.3MP
Ikhamera yangaphambili: 8MP
Ukutshaja izibuko: I-USB-C 9v2a 18W ngenkxaso ekhawulezileyo yokuhlawula.
Imimandla: I-Dual-SIM okanye i-SIM + Micro SD
Izatifikethi: IP68, IP69K kunye neMIL-STD-810G
Ifaka i-NFC chip ukwenza iintlawulo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-WP15 yi-Oukitel's smartphone entsha ene-15.600 mAh ibhetri
Ujonga njani iiphasiwedi ze-Wi-Fi ezigcinwe kwi-Android
Ungaduma njani kwi-Tiktok inyathelo ngenyathelo